09/13/13 ~ Myanmar Forward
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း အသင်မပြည့်သေးသည့် ကလေးငယ်များအား အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ကြံစည်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်များမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေသော မူခင်းဖြစ်စဉ်များအား လေ့လာချက်များအရ သိရသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းသို့ ဖြစ်ပွားလာမှုများကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပညာပေး ဟောပြောပွဲများကို ပိုမိုပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဆင်ဆာမဲ့ ညစ်ညမ်းခွေ ဖမ်းဆီးမှုကိုလည်း တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ ရဲမှူးမြင့်ထွေးက စက်တင်ဘာ ၁၂ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်ဟု သိရသည်။
အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်များ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ ဖြစ်စဉ်များ လျော့ကျစေရန် ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် မိန်းကလေးငယ်၏ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးများ၊ ပြည်သူအချို့မှ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများနှင့် အသက်ငယ် မုဒိမ်းရှုံချပွဲများကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဆက်တိုက် ပြုလုပ်နေကြောင်း ရဲမှူးမြင့်ထွေးက ပြောကြားသည်။
“ယခုနှစ်အတွင်း အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်သူက ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ တင်ပြလာတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် စည်းကမ်းချက်နဲ့အညီ ခွင့်ပြုချက်တွေ ပေးနေရတယ်”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပွားသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲမှူးက “မိန်းကလေးတွေရဲ့ အုပ်ထိန်းသူ မိဘတွေက အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း မထားသင့်ဘူး။ သူစိမ်းတွေကို ယုံကြည်ပြီးတော့လည်း အပ်မထားသင့်ဘူး။ အပြင်ကို တစ်ယောက်တည်း မလွှတ်သင့်ဘူး။ ညပိုင်းတွေမှာလည်း ဗီဒီယိုကြည့်တာ တစ်ယောက်တည်း မလွှတ်သင့်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ အရွယ်မျိုးစုံ၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကျူးလွန်တဲ့ သူကို အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ဖို့ ခရိုင်တရားရုံးကိုပဲ စွဲဆိုတင်ပို့ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ဇူလိုင်လမှ သြဂုတ်လအတွင်း ဆင်ဆာမဲ့အခွေ နှစ်သိန်းနီးပါးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၁ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်နဝါနရီမှ ဇူလိုင်လအထိ ခြောက်လအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ဖြစ်စဉ်အရေအတွက် ၇၀ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
Friday 13th အကြို ကံဆိုးခဲ့သည့် နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ်မင်း
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကျော် မင်းသမီးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယော့ခ်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ဖက်ရှင်ပြပွဲ တစ်ခုမှ သူမတည်းခိုသော ဟိုတယ်သို့အပြန် စက်ဘီးတစ်စင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဝင်တိုက်မှုနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။
အနောက်တိုင်းတွင် Friday 13thသည် ကံဆိုးတတ်သည်ဟူသော အယူအစွဲမျိုး ရှိသော်လည်း နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ်မင်း အနေဖြင့်မူ တစ်ရက်စောပြီး ကံဆိုးသွားခဲ့သည်။ ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကျော် မင်းသမီးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယော့ခ်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ဖက်ရှင်ပြပွဲ တစ်ခုမှ သူမတည်းခိုသော ဟိုတယ်သို့အပြန် စက်ဘီးတစ်စင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဝင်တိုက်မှုနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ ပွဲတက်ဝတ်စုံနှင့် နေကာမျက်မှန်တို့ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားသော မင်းသမီးသည် ယင်းအခြေအနေတွင် စတိုင်မကျနိုင်တော့ဘဲ ဒေါက်ဖိနပ်များပါ ကျွတ်ထွက်ကာ ဖရိုဖရဲ လဲကျခဲ့ရသည်။ သူမကို စက်ဘီးဖြင့် ဝင်တိုက်သူမှာ ကားလ်ဝူ အမည်ရှိ ပါပါရာဇီ ဓာတ်ပုံသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကားလ်သည် နစ်ကိုးလ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်လိုဇောဖြင့် ဒရောသောပါး စက်ဘီးစီးလာရင်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ အော်စကာဆုရှင် မင်းသမီးကို ဝင်တိုက်မိခြင်းဟု သိရသည်။ နစ်ကိုးလ် အနေဖြင့် လမ်းပေါ် လဲကျသွားရာမှ လူးလဲထစဉ် နာကျင်နေဟန်ရှိပြီး ကားလ်သည်လည်း စက်ဘီးနှင့်လူ တခြားစီ ပြုတ်ကျခဲ့သည်။ Calvin Klein ဖက်ရှင်ပြပွဲမှ ပြန်လာစဉ် နစ်ကိုးလ်နှင့် တောက်လျှောက် ကပ်ပါလာသော သက်တော်စောင့်များသည်လည်း ရုတ်တရက် ကြုံလိုက်သော အခြေအနေကို တစ်စုံတစ်ရာ မတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ချေ။ ကားလ်ကို နစ်ကိုးလ်၏ သက်တော်စောင့်များက ကြိမ်းမောင်းနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
TMZ သတင်းဌာနက နစ်ကိုးလ်သည် အဆိုပါ ပါပါရာဇီ သတင်းသမားကို အလွန်ဒေါသထွက်နေပြီး တရားစွဲရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ စက်ဘီးတိုက်မှု အပြီးတွင် အဆိုပါ ဟိုတယ်သို့ ဆေးရုံကားတစ်စင်း ရောက်လာပြီး နစ်ကိုးလ်၏ အသေးစား ဒဏ်ရာများကို ကုသပေးခဲ့ရသည်။ ကားလ်ကိုလည်း လူသွားလမ်းပေါ် စက်ဘီးတက်စီးခြင်းကို မေးမြန်းစစ်ဆေးရန် ရဲကားတစ်စင်းက လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ နယူးယော့ခ်တွင် လူသွားစင်္ကြန်ပေါ် စက်ဘီးစီးခြင်းကို တရားဥပဒေအရ တားမြစ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရန် KNU နှင့် RCSS သဘောတူ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA က လက်မှတ်ရေးထိုးရန် မူအားဖြင့် သဘောတူကြောင်း မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ အကြီးတန်းအကြံပေးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
KNU နှင့် RCSS အဖွဲ့တို့သည် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ တပ်မတော် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းတို့နှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံထားသည်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
လူရှေ့သူရှေ့မှာ စုံတွဲတွေ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ကြတာကို တခြားလူတွေက ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။
ဂျနီဗာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၃။
ဆီးရီးယားအစိုးရသည်ဓာတုလက်နက်များကို လိုက်လံခြေရာကောက်သည့် အားထုတ်မှုများကို ယုတ်လျော့စေရန် လက်နက်များကို နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ဖြန့်ထားကြောင်း သတင်းများထွက်လာချိန်တွင်ပင် ဆီးရီးယားဓာတုလက်နက်အရေးကို ရုရှားနှင့်အမေရိကန်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယရက်အဖြစ် ယနေ့ ဆက်လက်ပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်တို့ စစ်ရေးကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တားဆီးရန် ဆီးရီးယားအစိုးရ ဓာတုလက်နက်များကို လက်လျှော့ပေးမည့် အဆိုတစ်ခုကို ဆီးရီးယား၏ အဓိကမဟာမိတ် ရုရှားကပြုခဲ့ပြီး ကြာသပတေးနေ့တွင် ဝါရှင်တန်နှင့် မော်စကို ထိပ်တန်းသံတမန်များသည် ဂျနီဗာတွင် ၎င်းအစီအစဉ်ကို စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဓာတုလက်နက်များကို နိုင်ငံတကာ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆီးရီးယား သမ္မတအဆတ်က ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယမန်နေ့ကပြောကြားပြီး အမေရိကန်အနေနှင့်လည်း စစ်ရေးကြားဝင်ဆောင်ရွက်မည့် ခြိ်မ်းခြောက်မှုကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုသည်။
“အမေရိကန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးကို စစ်မှန်စွာလိုချင်တယ်ပြီတော့ စစ်တိုက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို လက်နက်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်ပစ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ လိုက်လုပ်နိုင်ပြီလို့ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်” ဟု အာဆတ်က ရုရှားတယ်လီဗီးရှင်းသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။
ရုရှားအစိုးရသည် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ဆောင်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည့် အမေရိကန်၏အမြင်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီက “ဆီးရီးယားအစိုးရရဲ့စကားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဆိုရင် လုံလောက်မှုမရှိတာတွေ့ရတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ယနေ့ကျင်းပသည့် ဒုတိယရက်ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်မီတွင် ဆီးရီးယားလျှို့ဝှက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုသည် ဓာတုလက်နက်များကို နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ဖြန့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။
၎င်းတပ်ဖွဲ့သည် ဓာတုဓာတ်ငွေ့များနှင့် စစ်လက်နက်များကို နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းရန် တာဝန်ယူထားကြောင်း အမေရိကန်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း အရာရှိများပြောကြား ကြောင်း၊ ရုရှား၏အဆိုတွင် လက်နက်လွှဲပြောင်းမှုတွင် အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယား အတိုက်အခံတို့ကမူ မတ်လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခကြောင့် လူပေါင်း ၁၁၀၀၀၀ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအဆိုပြုချက်ကြောင့် သေဆုံးမှုများထပ်တိုးစေမည်ဖြစ်ကြာင်း သတိပေးကာ စွပ်စွဲပြောကြားသည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းကြောင့် အာရုံကြောရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ပိုများလာ
ဆိုက်ဘာဂိမ်းနက်ဝပ်ခ်ဂိမ်းနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဂိမ်း၊ တက်ပလက်ဂိမ်းများက ပီဝမ်း၊ ပီးတူးဂိမ်းများကို အနိုင်ယူလာခဲ့သည့် ယခုနှစ်များအတွင်း ဂိမ်းကစားသူ ဦးရေ တိုးတက် များပြား လာခြင်းနှင့်အတူ ဦးနှောက်၊ အာရုံကြောနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများပါ ဖြစ်ပွားလာနေကြောင်း သိရသည်။
“ဦးနှောက်၊ အာရုံကြော အထူးကုတွေဆီကို အရင်က အများဆုံး လာရောက်ပြသတာ လူလတ်ပိုင်းနဲ့ အသက်ကြီးပိုင်းတွေ များပေမယ့် အခုတစ်နှစ်ကျော် ကာလအတွင်းမှာ အသက် ၁၂နှစ်ကနေ ၂၅နှစ်ကြား လူငယ်တွေ ပိုပြီး ပြသလာကြတယ်။ အများစုက အာရုံကြော ထိခိုက်ရခြင်း အကြောင်းကို သတိမပြုမိခဲ့ကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ အထူးကု ဆရာဝန်တွေ သတိထားမိတဲ့ အချက်က လာပြတဲ့ လူငယ်အများစုက ဂိမ်းအလွန်အကျွံ ကစားတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်”ဟု ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမေသူမွန်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ပြများရှိ အသက် ၂၀အောက် လူငယ်များ၏ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဂိမ်းကစားကြပြီး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၊ Network ဂိမ်းဆိုင်များနှင့် အင်တာနက်ဆိုင်များအတွင်း ဂိမ်းဆော့ ကစားကြကြောင်း ဂိမ်းဝါသနာရှင်တစ်ဦးက ပြောပြသည်။ ဂိမ်းကို စွဲလမ်းစွာ ကစာခြင်းကြောင့် မျက်စိအားနည်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာခံစားရခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ပြင်ပ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာများ၌ ဂိမ်းတစ်ခုသဖွယ် လှုပ်ရှားနေထိုင်ရာမှ မလိုလားအပ်သည့် ဒုစရိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ခက်ထန်လာခြင်း၊ အနိုင်ရလိုမှုနှင့် စိတ်ကူးယဉ်မှုဘက် မမျှမတ ဖြစ်လာခြင်း၊ လက်ချောင်းများနှင့် လက်ဆစ်များ သွေးပုံမှန် စီးဆင်းမှုမရှိပဲ အရိုးအဆစ်၊ အရွတ်ဆိုင်ရာ ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးသဖြင့် အခြားကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများအပြင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုပါ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် ဘီဘီစီ ကျန်းမာရေး သတင်းအွန်လိုင်း စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ကျွန်တော့ညီလေးဆိုရင် အချိန်မီ ကုသနိုင်လို့ တော်သေးတယ်။ သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ဂိမ်းကို အလွန်စွဲလမ်းလာတာ။ နောက်ပိုင်း မျက်စိမကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့က သိထားတာပါ။ နောက်ဆုံး အိမ်ပေါ်က ခုန်ချမယ်ဆိုတဲ့အထိ ဖြစ်လာတော့ သမားတော်တွေနဲ့ ပြသပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရတယ်။ ဆရာဝန်တွေက လူနာမျိုးရိုးနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို သေသေချာချာ မေးမြန်းတော့မှ ဂိမ်းစွဲလမ်းရာကနေ စပြီး ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် စိတ်ကျန်းမာရေးကို အပြင်းအထန် ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ သိရတယ်”ဟု သျှင်ပါဂူ ဆေးခန်း၌ မိမိညီဖြစ်သူကို ဦးနှောက်၊ အာရုံကြော အထူးကုနှင့် လာရောက်ပြသနေသည့် ကိုမျိုးသူက ပြောပြသည်။
ကာလကြာရှည်စွာ ဂိမ်းဆော့သူ တစ်ဦးအနေနှင့် မျက်တောင်ခတ်နှုန်း မြန်ဆန်လာတတ်ပြီး၊ အာရုံကြော အားနည်းခြင်းကြောင့် အကြောတက်ခြင်း၊ ဇက်မထိန်းနိုင်တော့ခြင်း၊ စိတ်ကစဥ့်ကလျား ဖြစ်ခြင်းအပြင်၊ နှလုံးရောဂါ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီ ဆိုပါက နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်များအဖြစ် စိတ်ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“ဂိမ်းစွဲနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြောင့် သူရဲ့ လသားကလေးလေး အစာငတ်ပြီး သေဆုံးခဲ့တာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်း မနက် ကျောင်းပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့တယ်။ အတန်း အားချိန်မှာလည်း ဆော့တယ်။ ညဘက် ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရင်တောင် နားချိန် ၁၅မိနစ်မှာ ဂိမ်းဆော့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်ကနေ ဂိမ်းတွေဆော့ရတာကို ကြိုက်တယ်။ အားတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ချိန်းပြီး ဂိမ်းဆော့ပြိုင် ဖြစ်တယ်”ဟု ရေကြောင်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟိဏ်းစွမ်းအောင်က ပြောပြသည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under မှုခင်း | No comments
ကလော၊ စက်တင်ဘာ ၉
CIA က ဆီးရီးယားသူပုန်များထံ ထောက်ပံ့သည့်လက်နက်များ ပထမအသုတ်ရောက်ရှိ
ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက CIAသည် ဆီးရီးယား သူပုန်တပ်ဖွဲ့များထံ လက်နက်များ ပထမအသုတ် စတင်ပေးပို့ခဲ့ပြီဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ၏ ထိပ်တန်း အရာရှိ တစ်ဦးက ယင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးဌာန CIAက ဆီးရီးယား သူပုန်များထံ လက်နက်များ စတင်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီဟု အမေရိကန် အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယင်းကို ဆီးရီးယား သူပုန်များက ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက CIAသည် ဆီးရီးယား သူပုန်တပ်ဖွဲ့များထံ လက်နက်များ ပထမအသုတ် စတင်ပေးပို့ခဲ့ပြီဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ၏ ထိပ်တန်း အရာရှိ တစ်ဦးက ယင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ အမည်ဖော်မပြသည့် အဆိုပါ အရာရှိက ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာပါ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုချက် ပေးခဲ့သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။ "
ဒီကိစ္စဟာ အစိုးရက ဝင်တားမြစ်မယ့် အရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လူသိရှင်ကြား စကားပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး"ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အမေရိကန်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် စစ်လက်နက်များကို CIAက ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ကာ သမ္မတ ဘာရှာအာဆက်ဒ်ကို တွန်းလှန်နေသည့် ဆီးရီးယား သူပုန်များထံ လွန်ခဲ့သည့် (၂)ပတ်က စတင်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ်က ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် အပေါ့စား တာဝေးပစ် လက်နက်များ၊ ဒုံးကျည်ဖျက် လောင်ချာနှင့် ကျည်ဆန်များ ပါဝင်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း သူပုန်တပ်ဖွဲ့များကို အဓိက ကြပ်မတ်နေသည် ဆီးရီးယား အမျိုးသား စုပေါင်းရေးနှင့် လွတ်လပ်သော ဆီးရီးယား တပ်မတော်ကမူ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုထံမှ လက်နက်များ ရရှိသည် ဆိုခြင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
"အမေရိကန် အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းဆီက ကျွန်တော်တို့ ကတိစကားတချို့တော့ ရခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်တွေကို ရေတို ကာလမှာတင် ပေးပို့မယ် ဆိုတာကိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လက်နက်တွေ လုံးဝ မရသေးဘူး"ဟု ယင်းအဖွဲ့မှာ မူဝါဒရေးရာနှင့် မီဒီယာ တာဝန်ခံ လူအေအယ်လ် မော့ခ်ဒက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်သည် ဧပြီလ ကတည်းက လက်နက်ကဏ္ဍ မပါဝင်သော ထောက်ပံ့မှုများကို ပြုလုပ်နေခဲ့သည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ကျည်ကာများ၊ ညကြည့်မှန်ပြောင်းများနှင့် အခြားစစ်သုံး ကိရိယာ အဆင်တန်ဆာများ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပုံဖြင့် ငွေစက္ကူများ ပြန်ထုတ်ရန်အဆို ရှုံးနိမ့်
နိုင်ငံ တော်တွင် ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းရုပ်ပုံများဖြင့် ပြန်လည်အ စားထိုးထုတ်ဝေပေးရန် တိုင်းဒေ သကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်၏အဆိုသည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဆဋ္ဌမပုံမှန်အ စည်းအဝေးတွင် မတ်တတ်ရပ် ဆန္ဒပြုနည်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ရှုံး နိမ့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်က ''ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ သမိုင်းက အ ဆုံးအဖြတ်ပေး လိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘယ်သူက တန်ဖိုး ထားသလဲဆိုတာ အဆုံးအဖြတ် ပေးတာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ဘယ်သူဆို တာ အားလုံးသိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ကို ဘယ်လိုနေရာပေးသလဲဆို တာ ဒီနေရာမှာ ခင်ဗျားတို့အား လုံးသိသွားပြီ''ဟု လွှတ်တော် အ စည်းအဝေးအပြီး မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အ စည်းအဝေးပထမနေ့တွင် သင်္ဃန်း ကျွန်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဦးကျော်က အဆိုတင် သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအဆို အား မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါက် တာစောလှထွန်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ သည့် လွှတ်တော်တွင်း မတ်တတ် ရပ်စနစ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ကအဆိုတင်သွင်း ရာတွင် ''နိုင်ငံတကာမှာ လဲ အ သုံးပြုတဲ့ငွေစက္ကူတွေမှာ နိုင်ငံ အလိုက် အထင်ကရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို ဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။ များ မကြာခင်နှစ်များတုန်းက ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်အထိ ခြသေ့င်္ပုံအမှတ်အသားကို တွေ့ ရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခြသေ့င်္ပုံတံ ဆိပ်က အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အ မှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါ နိုင်ငံ အတွက် နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လို လာပြီလို့မြင်လို့အဆိုတင်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုလဲ ပြည် သူတွေ က ဘယ်တော့မှ မေ့လို့ရ မှာမဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းတွေ ဘယ် လောက်ပြောင်းပြောင်း ဗိုလ်ချုပ် က အမြဲရှိနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ပြန်လည်အစားထိုး ထုတ်ဝေဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အ ဆိုတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်'' ဟု လွှတ်တော် သို့ အဆိုတင်သွင်း ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်မှထုတ်ဝေသည့် ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် ရုပ်ပုံများ ဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးအချိန် တွင် အစိုးရမှ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ဖော် ပြပေးခဲ့ခြင်းရှိပြီး ၁၉၆၂ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ လက်ထက်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ပြည်သူ့ကောင်စီလက်ထက်တွင် လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ၊ လယ်သမားခေါင်းဆောင် ဆရာ စံပုံ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် သခင်ဖိုးလှကြီးရုပ်ပုံများအား ထုတ်ဝေအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုတွေ့ ရကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အဆို တင်သွင်းရာတွင် ဦးကျော်က ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုအား ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါက်တာစော လှထွန်းကကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
ယင်းအဆိုအား သင်္ဃန်း ကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်တို့သာ အဆိုကိုထောက်ခံခဲ့ရာ လွှတ်တော် နည်းဥပဒေအရထောက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေမှာ လွှတ် တော်တွင်းရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ဦးရေ၏ ခြောက်ပုံတစ်ပုံ မရှိသည့်အတွက် အဆိုကို လွှတ် တော်မှ ဆက်လက်မဆွေးနွေး ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under သတင်းများ | No comments
ဒီနေ့ ထုတ် Daily Eleven မှာ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးသူများ၏ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်း များလော၊ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့် ငါးခုကို အစိုးရ အနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုလာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီသတင်းဆောင်းပါးမှာ အခုလို ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင် တင်ရှိနေသည့် အကြွေးမှာ ကြွေးမြီစုစုပေါင်း အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ သန်း၈၉၀ကျော်တင်ရှိနေကြောင်း၊တစ်ဘီလျံပင် မရှိသည့် ယင်းပမာဏသည် နဂိုချေး ထား သည့်ငွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အကြွေးဟောင်းမှ အတိုးများ တက်လာခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း အကြွေး မှာ တစ်ဘီလျံနီးပါးအထိ ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ မှ ပြည်ပတွင် ဘဏ်စာရင်း ငါးခုတည်းဖြင့် အပ်ထားသည့်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေခဲ့ကြောင်း ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Mr.Jelson Garcia က ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြား ကြွေးမြီကိစ္စများဆွေးနွေးပွဲများမှာ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်း ငါးခု မှာ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ကြိမ်မှ ထောက်ပြပြော ဆိုဆွေးနွေး ခဲ့တာမရှိပါဘူး။
နှစ်။ Daily Eleven က ညွှန်းထားတဲ့ Mr.Jelson Garcia ဆိုတာဟာလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၀န်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ Bank Information Center ဆိုတဲ့ NGO က ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချက်များအရ Bank Information Center ဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က http://www.bicusa.org/ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ The Bank Information Center (BIC) partners with civil society in developing and transition countries to influence the World Bank and other international financial institutions (IFIs) to promote social and economic justice and ecological sustainability. BIC is an independent, non-profit, non-governmental organization that advocates for the protection of rights, participation, transparency, and public accountability in the governance and operations of the World Bank Group and regional development banks.
အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီ လ ၈ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ Mr.Jelson Garcia က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ များစတင်ပေး မယ့်အခြေအနေ ကိုတင်ပြဆွေးနွေးတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက်က အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ် -
နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အဝတ်အထည် လုပ်ငန်းကြီးက ရွေးချယ်သော Victoria's Secret နတ်မိမယ်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး မော်ဒယ်လ်များ အဖြစ်လည်း တင်စားခံရလေ့ ရှိသည်။
Victoria's Secretသည် ယခုနှစ်အတွက် အမှတ်တံဆိပ် ကြော်ငြာကာ Catwalk လျှောက်ပေးမည့် မော်ဒယ်လ်များ စာရင်းကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အဝတ်အထည် လုပ်ငန်းကြီးက ရွေးချယ်သော Victoria's Secret နတ်မိမယ်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး မော်ဒယ်လ်များ အဖြစ်လည်း တင်စားခံရလေ့ ရှိသည်။ ယခုနှစ်တွင် ထူးခြားမှု အနေဖြင့် Victoria's Secret၏ ပင်တိုင် အလှမယ်များဖြစ်သည့် မီရန်ဒါကားရ်၊ ကာရာဒီလီဗင်နီတို့ မပါဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးခါနီးတိုင်း ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် Victoria's Secret၏ Catwalk အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ်၌မူ နယူးယော့ခ်မြို့၌ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု သိရသည်။
Victoria's Secret၏ နာမည်ကျော် အလှနတ်သမီးများဖြစ်သည့် အေဒရီယန်လီမာ၊ အလက်ဇန္ဒရို အမ်ဘရိုစီတို့သည် ဆွဲဆောင်မှုပြင်းပြသည့် အတွင်းခံ အဝတ်အထည်များနှင့် ကိုယ်ဟန်ပြရန် အသင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ သူမတို့နှင့်အတူ လိုင်လီအဲလ်ဒရစ်ဂ်ျ၊ ကန်ဒိုက်စ်ဆွမ်နီပိုဝဲလ်တို့ကလည်း အားဖြည့်ပေးမည်ဟု သိရသည်။ ဩစတြေးလျ မော်ဒယ်လ် မီရန်ဒါက သူမအနေဖြင့် မိခင်ဘဝကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လိုသဖြင့် Victoria's Secret၏ အစီအစဉ်တွင် (၁)နှစ်ကြာ မပါဝင်လိုကြောင်း ကုမ္ပဏီနှင့် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Victoria's Secret၏ ဖက်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲများတွင် ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်များကိုလည်း ငှားရမ်းလေ့ ရှိတတ်ရာ ယခုနှစ်အတွက် မည်သည့်ကြယ်ပွင့်များ ပါဝင်လာမည်ကို မသိရသေးချေ။ ယမန်နှစ်ကမူ ဂျက်စတင်ဘီဘာ၊ ရီဟန်နာ အစရှိသည့် နာမည်ကြီးများက ပင်တိုင် မော်ဒယ်လ်များနှင့်အတူ တွဲဖက်ဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်သွားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ဆိုတာနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး အသိအမှတ်ပြုခံရသလို အလွန် အင်မတန်မှ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ အဖြစ် သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူ သီလရှင်ဆရာလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို Golden Land ဆိုပြီး တင်စားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာလေး ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နေရာ အနှံ့ ရွှေထွက်နေလို့ ရွှေနိုင်ငံလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကျင့်သီလကို အထူး စောင့်ထိန်း လိုက်နာပြီး အလွန် အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ရွှေနိုင်ငံလို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ငါးပါးသီလဆိုတာကို တန်ဖိုးထား ရပ်တည်လျက် ရှိနေသည်ကို ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ အစီအစဉ် ရှိမရှိ လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ ပထမ အကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမ အကြိမ် ပုံမှန် အစည်း အဝေးမှာ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ရဲချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းက အဲဒီဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း ဖြေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက “ဒီမေးခွန်းကို ဒီလိုဖြေမယ်ဆိုတာ တွက်ထားပြီးသား။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာ တွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီဥပဒေ ခေတ်မမီတော့တာ၊ တခြား တိုင်းပြည်မှာ ဒီကိစ္စကို ဥပဒေနဲ့ ဘယ်လို ထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်နေတယ်၊ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းနေတယ် ဆိုတာကို သိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ ပေတံတွေနဲ့ တိုင်းပြီးတော့ ဒါတွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ” လို့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမတ်မင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်းမှ ငါးပါးသီလမှာ ပါဝင်သည့် ရှောင်ကြဉ်ရမည့် ကာမေသုကို တရားဝင်လိုင်စင်အဖြစ် လုပ်ကိုင် လိုကြောင်း ပြောကြားလာသဖြင့် နားကြားပင် မှားသလို ထင်မိပါ သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုသည်နှင့် (၉၆)ပါးရောဂါ အကုန်ပျောက်သည် ထင်နေပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ အများကြီး ကွာခြားလှပါသည်။ မတူတာကို အတင်း တူအောင် လုပ်၍မရပါ။ လုပ်၍ရတယ်ဆိုလျင် မိမိလက်ချောင်းများကိုပင် အတိုအရှည် ညီအောင် လုပ်ကြည့် စေချင်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာအား တရားဝင် လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုပါက ရရှိလာမည့် အကျိုးအပြစ်ကို နှိုင်းယှဉ်စေလို ပါသည်။
မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု အရ ဘယ်မိဘမှ မိမိသားသမီးများကို တရားဝင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခိုင်းလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖာသည်မသမီး၊ ဖာသည်မ အမေ ဟု မည်သူမျှ အခေါ်မခံလိုပေ။ ဒါကြောင့် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ပြောသလို တရားဝင်ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းဆိုတာလဲ ဖြစ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ယခုလိုပဲ တရားမ၀င် လုပ်ကိုင် နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး ဥပေဒမှာက ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရလျှင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် တစ်နှစ်အောက် မနည်း၊ သုံးနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ် ကျခံရမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း တင်သွင်းချင်တာက ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့ လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းချင်လို့ အစပျိုး မေးခွန်းကို မေးလိုက်တာပါ။ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေ လွတ်လွတ် လပ်လပ် လုပ်လို့ရရင် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ကိုယ်တိုင်များ တည်းခိုခန်းဖွင့် စားမလို့လားလို့ တွေးတဲ့သူတွေက တွေးနေ ကြပါတယ်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမဲ့ အခြားမေးခွန်းတွေ မရှိတော့ ဘူးလားလို့လဲ ပြောသူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းဟာ ထင်ပေါ် ကျော်ကြား လိုတဲ့ အချို့သော ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေလို ကိုယ်လုံးချွတ်ပြလို့ မရလို့ ဋ္ဌေးကြွယ်နဲ့ ညအိပ်ခဲ့ တာတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတွေ လုပ်နေတာလားလို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ဒါဟာ မြန်မာပြည်ပါ…။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်လို့ ကြွေးကြော်နေပြီး ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားတဲ့ သူတွေ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေကို တရားဝင် လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မောင်နဲ့နှမ၊ သားနဲ့အမိ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာဘယ်လို မျက်နှာပြကြမလဲ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမျိုး ကိုတော့ မစဉ်းစားသင့် ပါဘူး။ အခုတလော ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေမှာ မိသားစု ထိုင်ကြည့်လို့ မရတဲ့ ပြကွက်တွေ ပါနေလို့ လူတွေ ကန့်ကွက် နေကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲကမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမကြီးက လိင်ကိစ္စကို အထူး စိတ်ဝင်စားစွာ ပြည့်တန်ဆာတွေ အတွက် စဉ်းစားပေးတယ် ဆိုတော့ ဒေါ်စန္ဒာမင်း ဟာ သမီးမွေးထားသူ မဟုတ်လို့ပဲ။ သမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တောင် ဒီလိုအတွေးမျိုး ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
ဒေါ်စန္ဒာမင်းရဲ့ သမီးဟာ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် စားသောက် ပါတယ်ဆိုရင် အမေတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မှာလဲ။ တကယ့်ကိုနက်နက်နဲနဲ တွေးခေါ် စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း ကိုယ်တိုင်က ဒီကိစ္စတွေမှာ လွန်လွန် ကျူးကျူး စိတ်ဝင်စားနေတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြ လိုက်တာလား။ ကိုယ့် ယောက်ျားနဲ့ နေရတာတင် အားမရလို့ ဋ္ဌေးကြွယ်နဲ့ အိပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီလိုမျိုးအိပ်ချင်လို့ တရားဝင် အိပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့ သဘောလား။
ပြည့်တန်ဆာအား တရားဝင်လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါက နှစ်များစွာကြာမြင့် လာပါက မျိုးမစစ်များ အများကြီး ပေါ်ထွက် လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမစစ်လျင် အမျိုးကို မချစ်တတ်ပါ။ အမျိုးမချစ်တတ်လျင် ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ ပျောက်ကွယ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြေမျို၍ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမျိုမှသာ လူမျိုးပျောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ တည်သ၍ မြန်မာဟု ရှိနေစေရန် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း စဉ်လာများကို စောင့်ထိန်း လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသလို လူနည်းစု၏ အခွင့်အရေးများကို အလေးထားပါဟု ပြောကြားသည်ကို သိရပါသည်။
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ပတ်သက် လျှင်တော့ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကိုသာ အလေးထား စောင့်ထိန်း လိုက်နာ ရပါမည်။ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ထိန်းရန် နားမလည်သူများကို နားလည်သူများက စောင့်ထိန်း လိုက်နာစေရန် ၀န်းရံကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အမျိုး ဘာသာ၊ သာသနာကို မြန်မာလူမျိုးများမှ မစောင့်ရှောက်လျင် ဘယ်လူမျိုးက လာစောင့်ရှောက်မည်လဲ? ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့် တာကို အလေးပေး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း အနေဖြင့် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို မစောင့်ရှောက် လိုလျင်လည်း အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၏ အနှစ်သာရကို မသိသေးသည့် အမျိုးကောင်း သားသမီးများကို လူ့အခွင့်အရေး ဆိုသည့် ပေတံဖြင့် တိုင်းတာကာ မလုပ်ဆောင်သင့်ပေ။ မနေနိုင်ပါက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်လျင်လည်း သဘောတော်ရှိသည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင် နိုင်ကြောင်းနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျင် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင် ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ ။။။
ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ် လိုင်ဇာကို တကယ်အပြုတ်တိုက်တော့မည်လား ...
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ကေအိုင်အေ | No comments
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင်အခြေစိုက့် (KIA) တပ်မဟာ (၃) ဒေသရှိ မုန်းဒိန်ပါ၊ မုန်းခေါင်နေရာတွင် ယနေ့နံနက် မှာ တပ်မတော် နှင့် KIA တပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗန်းမော်ဖက်မှလှုပ်ရှားလာသော အစိုးရတပ်များသည် KIA တပ်ရင်း ၂၇ နှင့် တပ်ရင်း ၁၂ ရှိရာဖက်သို့ လှုပ်ရှားလာသောကြောင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA ဖက်မှအတည်ပြုသည်။
တိုက်ပွဲများသည် ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်လည်း နံနက်ပိုင်းမှ ည ၆ နာရီထိ မဂျီကောင်ကဂျီမှ ဂျေခဖက်သို့လှုပ်ရှားလာသော အစိုးရတပ် ခမရ (၅၀၇) နှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရတပ်ဖက်မှကိုင်ထိပ်တောင်ကုန်းမှ KIA တပ်ရှိရာသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း တပ်မဟာ (၃) ဌာနချုပ် မိုင်ဂျာယန်မှ KIA စစ်ဗိုလ် ဇော်ဆိုင်းက KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
“မနေ့ကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ကြတာပိုများတယ်။ မနေ့ကမနက်ကနေ ဒီနေ့ နေ့လည်ထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ အခုက အစိုးရတပ်တွေ နေရာအနှံ့ စစ်အင်အားတွေတိုးချလာလို့ အဲလိုကနေ နယ်မြေတွင်းဝင်လာတော့ ပစ်ကြတာပါ။ ဒီနေ့ ၁၂ နာရီထိတော့ တော်တော်လေး ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုကိုတော့ အတည်ပြုလို့မရသေးဘူး။”
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများသည် ပြင်းထန်မှုရှိပြီး အစိုးရတပ်ဖက်မှ စစ်ကြောင်းအလဲအလှယ်လုပ်သည်ဟု အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးပေးနေကြောင်းဆက်ဆိုသည်။
“သူတို့ဖက်က ကိုယ်နယ်မြေထဲဝင်လာတော့ KIA ဖက်ကပစ်တယ်။ အဲဒါကို အစိုးရဖက်ကတော့ လမ်းမှားလို့ပါ၊ စစ်ကြောင်းသစ် အလဲအလှယ်လုပ်တာ လမ်းမှားသွားကြတာဆိုပြီး ပြောတာပေါ့။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကအမြင်ကတော့ ဒီလိုနေရာတွေမှာတောင် လျှောက်သွားနေမှတော့ လမ်းမသိလို့ ပါ ဆိုတာကတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ စစ်ရေးဖက်ကပဲကြည့်ကြည့်။ သိလျက်နဲ့ လာပြီး တိတ်တဆိတ် ၀င်အုပ်မယ့်သဘောပဲ။ နိုင်မယ့်အလားလာမရှိရင်တော့ လူထုကို ခေါင်းစဉ်တခု ပြန်တပ်ပြီး အကြောင်းပြတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
အဆိုပါ KIA တပ်မဟာ (၃) ဒေသသည် ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက်အခြေစိုက် ခမရ ၅၀၇၊ ခလရ ၂၄၁၊ ခလရ ၆၉ လှုပ်ရှားနယ်မြေများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရတပ်များသည် တပ်မဟာ (၄) ဖက်တွင်လည်း ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးဟု ပြောဆိုကာ ယမန်နေ့မှ ယနေ့ထိ ၁၀၀ ခန့်တိုးချထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုလဆန်းပိုင်းမှစ၍ အစိုးရတပ်များသည် KIA တပ်ရှိရာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဖက်တွင်သာမက ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ပန်ဝါဒေသ၊ ပူတာအိုဒေသ၊ ဆဒုန်းဒေသ အသီးသီးတို့တွင် အင်အားဖြင့်လှုပ်ရှားနေကြောင်း KIA အရာရှိများ ပြောသည်။
မကြာသေးခင် ကပဲ KIA ဘက် က တပ်မတော် မှ သုံ့ပန်း စစ်သည် ၁၄ ဦးကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ် ၊ ဗိုက်ခွဲ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် အစိုးရ တပ်မတော် မှ ပြင်းပြင်ထန်ထန် တုန့်ပြန်မယ်လို့ သတင်းများ ပျံ့နှံ့လာ
ပြီး အခုလို တပ်တွေ လှုပ်ရှားမှု ရှိလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under မုဒိမ်းမှု | No comments
ကန့်ဘလူ၊ စက်တင်ဘာ ၁၂
ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ သီးသီးခူးရအောင်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူမှ အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူကို ပြောဆိုခေါ်ဆောင်ပြီး သီလရှင်ကျောင်း ဟောင်းကြီးပေါ်သို့ဆွဲတင်ကာ အလိုမ တူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာက ဒီလ ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၂ နာရီအချိန်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်..။ အမှုဖွင့် အရေးယူတာက ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၂ နာရီအချိန်မှာပါ..” ဟု အဆိုပါ ဒေသခံ တစ်ဦးမှ ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြစ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားသတင်းအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရန် ကန့်ဘလူမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး မှူးထံသို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ “ ဖုန်းကတော့ ဦးကျော်စိုးရဲ့
ကန့်ဘလူမြို့နယ် လူမှုထောက်ကုပြု ကွန်ရက်အဖွဲ့ ၀င်တစ်ဦး၏ ပြောပြချက်များအရ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်နှင်းနှင်းထွေး အသက်(၃၃)နှစ်၊ ဘခင်အမည် ဦးစိုးမြင့် ဆိုသူမှ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်နယ်မြေရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ရာ ၎င်းရဲစခန်းမှ (ပ)၂၁၅/ ၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုရေးဖွင့်ပြီး ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် ၀င်းမြင့် ဆိုသူမှ အမှုအား ဆက်လက်၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်(KBC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ
ခလမ်ဆမ်ဆွန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဆိုပြီး ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ထုတ်7Days News Journal မှာဖတ်လိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်သိတာကတော့ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော် (KBC) ဆိုတာ ဘာသာရေးအသင်းတစ်ခုပါ။ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့အသီးသီးမှာရှိတဲ့ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းများနဲ့ဆက်စပ်ပြီးခရစ်တော်၏သွန်သင်ဆုံးမမှုအောက်မှာ မေတ္တာတရားနဲ့
နေတဲ့သူတွေလို့ သိထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် လိုချင်သူတွေလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ Interview ကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ကြက်တူရွေးကတော်တော်၊ မယ်တော်ကကဲကဲဆိုသလို ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ၊ ခံပြင်းစရာတွေ၊ နားမလည်နိုင်တာတွေ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပုံလည်းမရဘူး ပြောပုံအရဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိတာလား နောက်ကွယ်က တစ်ခုခုကြိုးကွယ်မှု
အကြီးအကဲ ရှမ်းလူမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဥက္ကဌတာဝန်ယူပြီး လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူကို ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်ရတာလဲ၊ ပြောရဲရတာလဲ၊ ရှမ်းလူမျိုးမို့လို့လား….။
တကယ်တမ်းပြောရရင် ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာကချင်လူမျိုးတွေချည်းပဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကချင်ပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ၁၆ သိန်းမှာကချင်က ၆ သိန်း၊ ရှမ်း၊ဗမာနဲ့ အခြားလူမျိုးများက ၁၀ သိန်းဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေအချိုးနဲ့သာဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလို ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းရှမ်းလူမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပါ။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့မဲပေးထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဘာကိုကြည့်ပြီးသုံးသပ်ပြီးပြောတာလဲ။ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အခြေခံဥပဒေကို နားမလည်လို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောစရာတွေအများကြီးပါ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် KIA နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ နောက်မှာအဓိက လက်သည်တရားခံကက ချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတွေပါပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ လူမျိုးစုအားလုံးကို သိမ်းသွင်းပြီး လွတ်မြောက်သောကချင်နိုင်ငံ (၀မ်ပေါင်နိုင်ငံ) ထူထောင်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ အန္တိမရည်မှန်းချက်ပါပဲ။ ပါးစပ်ကမခွဲထွက်ဘူး မည်သို့ပင်ပြောစေကာမူ လက်တွေ့မှာတော့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နဲ့ လွတ်လပ်သော ကချင်နိုင်ငံတော် ဖြစ်ရေးပါပဲ။
မြေအောက်က KIO၊ KIA က လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်သလို မြေပေါ်မှ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတွေက ၀န်းရံပြီး ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာအဲဒီ Interview က ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာပါပဲ။ KBC ရဲ့ သဘောအမှန်ကို ပြလိုက်တာပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားတန်ဖိုးမထားတာကို ပြသလိုက်တာပါပဲ။
လွှတ်တော်ကိုလည်း IDPS အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပြောတာနဲနဲပါးပါးပဲကြားရတယ်။ လိုလိုလားလားမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းရှိရုံမကလွှတ်တော်ကိုလည်းပမာမခန့်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း လွှတ်တော်ရဲ့လူဖြစ်တယ်၊ ကချင်အရေးကို ဘာမှမဟုတ်သလို လျစ်လျူရှုထားတယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီဥက္ကဌ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ IPDS အတွက် ငွေပဲလှူတယ်၊ ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခသည်တွေကို အားမပေးဘူးဆိုပြီး မလိုတမာပြောခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်ဆိုတာ KBC ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ 7days ကလည်း လေးစားယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ Interview လုပ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ လမ်းဘေးကလူတစ်ယောက်ပြောသလို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရောင်ခြည်အတွက် တိမ်သလ္လာဖုံးသွားတာဘဲလို့ မြင်မိတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ Sea Game နဲ့ အာဆီယံဥက္ကဌယူဖို့ နီးလာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဖြစ်သဘောလုပ်ချင်တာများတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့တဲ့အချက်ဘဲ။ ဒါဟာ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် စော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ၊ အစိုးရအတွက်လား၊ တပ်မတော်အတွက်လား၊ KIA အတွက်လား။ တကယ်တော့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူအားလုံးအတွက် ဥမမယ်စာမမြောက် လူလာမမြောက်သေးတဲ့ စစ်ရဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ၊ ဒုက္ခသည်အားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်၊ လူသားအားလုံးအတွက် အစဉ်ထာဝရ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ အသင်းတော်လူကြီး တစ်ယောက်က ဒီစကားတွေ ပြောထွက်တာဘာကြောင့်လဲ၊ အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ ခရစ်ယာန်အသင်းတော် အရေခြုံထားတဲ့ မြေပေါ် KIO၊ KIA ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဘရန်ရှောင်ကိစ္စမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာ၊ တပ်က တရားဥပဒေအပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်ထားပဲလို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးက အပြစ်မရှိထောင်ချလို့မရပါဘူး။ သက်သေမခိုင်လုံဘဲနဲ့ တရားစီရင်လို့မရပါဘူး။ တပ်ကို ဘာကြောင့်ဆွဲထည့်ရဲတာလဲ။ သာမန်အရပ်သား သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက် အနေနဲ့တော့ ပြောချင်မှပြောမှာပါ။ နောက်ကွယ်မှာတော့ အားကိုးရှိလို့ဆိုတာတော့ တွေးကြည့်ရင် ပြေးကြည့်တာထက် မှန်နေပါဦးမယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ကြီး ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားပါတယ်။ KIA ကော တပ်မတော်ကကော စစ်မတိုက်ချင်တာ သေချာပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသံစဉ်တွေကြားမှာဝင်ပြီး ကိုးလို့ကန့်လန့် လုပ်နေတာကတော့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသလိုလိုနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်၊ အမြတ်ထုတ်၊ လုပ်စားနေတဲ့ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်လို ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုး ကြာကူလီရုပ်မျိုးနဲ့ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်ပြီး ဘာသာရေးအရေခြုံထားတဲ့ လူမိုက်တွေပါဘဲ။
ကချင်ပြည်နယ်ကြီး ထာဝစဉ် ငြိမ်းချမ်းစေချင်ရင်တော့ ဒီလိုလူမိုက်တွေကို အရင်ဆုံး အပြတ်ရှင်းရမှာပါဘဲ။ သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပြီး ကချင်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုင်စွဲပြီး
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖျက်မြင်းတွေကို သတိထားဖို့ လိုကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under နည်းပညာ | No comments
အမေရိကမှာ Downloadရယူခြင်း ခံရဆုံး စမတ်ဖုန်းAppဆယ်ခု စာရင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကမှာ Downloadရယူမှု အများဆုံး ဆိုတဲ့ Appတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံးApp တွေဖြစ်ဖို့ ဆက်နွယ်လျက် ရှိပါတယ်။ အားလုံး ထင်ထားတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက် Facebookဟာ Downloadရယူမှု ၇၆.၁ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ နံပါတ်တစ် နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါဟာ Androidကော၊ iOSအတွက်ပါ လေ့လာထားတဲ့ စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Google Play
၄။ Google Search
၇။ Apple App Suite
၈။ Pandora Radio
၉။ Yahoo Stocks
၁၀။ Apple Maps
၁၂။ Yahoo! Weather Widget
၁၃။ Voice Search
၁၅။ Facebook Messenger
စစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့ ပုံကိုလည်း ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။ သင်ရော ဒီထဲမှာ ဘယ်Appကို သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းထဲ Downloadလုပ်ဖြစ်တာ အများဆုံးလဲ?
ကမ္ဘာ့ထက် ၅ ဆလောက်ကြီးတဲ့ Nibiru ဂြိုဟ် ကြီး ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်ရင် ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ပြောကြတာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တွေက ဘယ်လိုလက်ခံကြတယ် - Alien လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့ အရိပ်အယောင် တွေ့ပြီလားဆိုတာတွေကိုတင်ပြထားတာပါ။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း,ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပြင်စာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ "ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး" လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် စည်းကမ်းအသစ် ချမှတ်လိုက်တာကြောင့် ကျောင်းသူကျောင်းသား ၃ဝဝ ကျော် စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဒီကိစ္စကို ပြန်လည်စိစစ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုနေမျိုးထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း,မြန်မာသတင်းများ | No comments
မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီး စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားလဲမရှိ၊ အလုပ် လုပ်ခွင့်လည်း မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လျော်ကြေးပေးစရာမလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာခွင့်ပြုမယ်လို့ မြန်မာ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးအေးမြင့်က ပြောပါတယ်။ မလေးရှားအစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး ခရီးရောက်မ
ဆိုက်ပဲ ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ ၀န်ကြီး ဦးအေးမြင့်က သတင်းထောက်တွေကို အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
Nauru ကျွန်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကိုလေယာဉ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေ (Credit: ABC licensed)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ​ခရစ္စမတ်ကျွန်း ​ထိန်းသိမ်းစခန်းကနေ ​Nauru ​ကျွန်းကို ​ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ ​ခိုလုံ ခွင့်တောင်း ခံသူ မိသားစုတွေ ထဲမှာ ​မြန်မာနိုင်ငံက ​လူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
မနေ့က ​Nauru ​ကျွန်းကို ​ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ ​ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူအုပ်စုထဲမှာ ​၃၁ ​ယောက်ပါဝင်ပြီး ​သူတို့တွေ ဟာ ​အီရန်နိုင်ငံနဲ့ ​မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဖြစ်ပြီး ​အဲဒီထဲမှာ ​အသက်အငယ်ဆုံးက ​၆နှစ် ​အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့ ​Nauru ​အစိုးရက ​ပြောပါတယ်။
သြစတြေးလျရေပိုင်နက်ထဲကို ​မနေ့က ​တရားမ၀င် ​၀င်ရောက်လာတဲ့ ​လှေထဲမှာ ​မြန်မာနိုင်ငံက ​လူတွေလည်းပါတယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
တရားမ၀င် ​၀င်ရောက်လာတဲ့လှေကို ​သြစတြေးလျ ​ရေတပ်က ​ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ​သြစတြေးလျ ​ပိုင်နက်မှာရှိတဲ့ ​ခရစ္စမတ်ကျွန်းကို ​ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ ​သိရပါတယ်။ ​အခုရောက်လာတဲ့လှေဟာ ​သြစတြေးလျ ​အတိုက်အခံပါတီ ​ညွန့်ပေါင်းအစိုးရသစ် ​တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ​ဖမ်းမိတဲ့ ​တတိယ ​မြောက်လှေဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကပဲ ​သြစတြေးလျရေတပ်ကလည်း ​ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ ​၇၄ဦး ​တင်ဆောင်လာတဲ့ ​တရားမ၀င် ​၀င်ရောက်လာတဲ့ ​လှေတစင်းကို ​ဖမ်းမိခဲ့ပြီး ​ခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ​အခုဖမ်းခဲ့တဲ့ ​လှေဟာ ​သြစတြေးလျ ​အတိုက်အခံပါတီ ​ညွန့်ပေါင်းအစိုးရသစ်တက်လာကတည်းက ​တတိယမြောက် ​ဖမ်းမိခဲ့တဲ့လှေဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ​ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ​မွတ်စလင် ​ရိုဟင်ဂျာ ​အယောက်ပေါင်း ​၂၀၀ ​ကျော် ​တင်ဆောင်လာတဲ့လှေတစင်း ​ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ​မနေ့က ​ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ​ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ​ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ​ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေအားလုံးဟာ ​အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ ​အသက် ​၁၅နှစ်နဲ့ ​၄၀ ​ကြားမှာရှိပြီး ​မြန်မာနိုင်ငံ ​ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်ကနေ ​လာတာဖြစ်တယ်လို့ ​ယူဆ ​နေကြပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း | No comments
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း မယ်စကြ၀ဠာ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပထမအဆင့် အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲကို သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲက ရွေးချယ်ခံရမယ့် Miss Universe Myanmar 2013 ဟာ အခုနှစ် အောက်တိုဘာလ နှောင်းပိုင်း ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ အခမ်းအနားမှာ ကိုယ်တိုင် သတင်းသွားယူခဲ့တဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
Facebook ပေါ်က Video တွေကိုအလွယ်ကူဆုံး Download ပြုလုပ်နည်း
Posted by drmyochit Friday, September 13, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
Facebook ပေါ်က Video တွေကို IDM နဲ့ Download ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်..သို့ပေမယ့် IDM လည်းမရှိဘူး..ဘာနဲ့ဒေါင်းရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်အခုဖော်ပြတဲ့နည်းနဲ့သာ Download ရယူလိုက်ပါ..အလွန်
အဆင်ပြေပါတယ်...ကဲ..ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. အရင်ဆုံး ဒီ Link ကိုသွားပါ..ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့
အကွက်ထဲမှာ Facebook ရဲ့ Video Link ကိုထည့်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် Download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ... ဒါဆိုရင်အောက်ပါအတိုင်း Low Quality နဲ့ဒေါင်းချင်သလား High Quality နဲ့ဒေါင်းချင်သလား...ကြိုက်တာကိုရွေးပြီး Download ရယူနိုင်ပါပြီ..အဆင်ပြေကြပါစေခင်မျာ။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကြောင့် Eleven Media အရှက်ကွဲ
အစိုးရ၏ ဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း ငါးခုနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာအပ်နှံထားသည့် သတင်းကို ပြောကြားခဲ့သူ Mr.Jelson Garcia မှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုယ်စား ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဟုတ်ပဲ NGO အဖွဲ့အစည်း Bank Information Center တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သူသာဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သော် လည်း ဒေါ်လာ (၁၁)ဘီလီယံ ရှိ/မရှိကိုတော့ ပြောကြားခြင်းမရှိ။
Mr.Jelson Garcia သည် NGO တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ တစ်ဦးသာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ဘာမှ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသလို ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားပြုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မဟုတ်ပါ။
(၂)ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှုခြင်းကို ရှောင်
ကြဉ်ပါ။ ယင်းတို့က လက်ရှိနာကျင်မှုကို ပို၍ ဖြစ်စေပြီး နောက်ထပ် နာကျင်မှုများ ကိုပါ ဆက်တိုက်ဖြစ်စေတတ်သည်။ ဆေးလိပ်ငွေ့သည် အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်ထွက်မှုကို ပိုပြီးတိုးစေသည့် အလျောက် နာကျင်မှုကိုလည်း တာရှည်စေသည်။
(၃)အနီရောင်အသားများ၊ အဆီများသောအကြော်များ၊အဆီစာများ ရှောင်ပါ။ ကြိုချက်ထားသောကွေ့ ကာအုတ်ဂျုံတွင် သကြားနှင့်ဆား ထည့်စားနိုင်သော်
လည်း နို့ကို ချင့် ချိန်၍ထည့်ပါ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော ဥပမာချော
ကလက် စားသုံးခြင်းကို ချင့်ချိန်ပါ။
(၄)တစ်နေ့တာအတွက် အစာကို နည်းနည်းနှင့် (၅-၆)ကြိမ်၊ နားနား၍ စားပေးပါ။
(၅)အစာစားပြီးချိန်နှင်ညအချိန်များ တွင် ပို၍နာကျင်ပါက ဆရာဝန်နှင့်
(၆)စိတ်ဖိစီးမှုသည် အစာအိမ်နာ ကျင်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ဖြစ်ပေါ်တတ် သဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကြိုးစား၍ ဖြေလျော့ပြီးနေပါ။